umatshini wokusika umququ othengiswa ugesi kunye nedizili
Sinjengomatshini othembela kumququ wamanqatha ombane ovela eChina ukukunika umgangatho olungileyo kwaye mhle umatshini wokusika umququ wezolimo ukuze utye izilwanyana,Sinemibala eyahlukileyo kunye nomthamo ohlukileyo onokuthi ukhethe. Sidala uluhlu oluhle kakhulu lokusika kumanqatha ombane kunye nomatshini wokusika injini yedizili kubaxumi abahlonitshwayo ngokomgangatho wecandelo.
Umatshini wokusika udizili unikwa umgangatho oqinileyo wokucola ukutya ngokufanelekileyo ngobuninzi obufanayo Umatshini wokusika umququ wombane udla ngokusetyenziswa kwiifama zeenkukhu ukusika inyama yeenkomo.,igusha,yehagu,Ixhama,Njengomenzi wemisila osika umakhi, Sifuna iimveliso ezifanelekileyo kunye nenkonzo elungileyo Ngaphezu, iimveliso zethu ziyaziwa ngesakhono sazo esisebenzayo sokunciphisa inkcitho yokutya.
umatshini wethu wokusika umququ unezibonelelo:
1.Umatshini wokusika wombane weha hay unesakhiwo sentsimbi,ubunzima bokukhanya,intshukumo elula.
2.ukwenza isixhobo sokhuseleko,iyayekisa,ukhuseleko kwaye luthembekile.
3.Ingca yokuqengqeza ingca yokuqokelela ikhethiweyo,ulungelelwaniso,ukusebenza okulula,indibano elula.
4.ukuxhasa ukukhetha okunamandla kunye nokwahluka,nokuxhasa imoto,injini yedizili,Iitrektara,ngakumbi ukunqongophala kwendawo yombane.
5.umatshini wokusika wombane umalethi ngentsimbi esemgangathweni,Inkqubo ekhethekileyo,Ayikwazi ukunxiba into entle,
6. Ukondla okuthe ngqo kunye nokuhambisa umatshini olawulwa sisitshintshi, kulula ukuyitshintsha, phambili kwaye ugoduke ngokukhululekileyo.
7. Olona hlobo lukhulu lwasekhaya, olona hlobo lusebenzayo oluphezulu lomsiki wengca; ulungelelwaniso lweethayi zerabha, ukusombulula izixhobo ezikhulu, ukungahambelani kwezinto ezingahambelaniyo esiphathwayo.
8. Ukukhethwa kwe blade yensimbi esemgangathweni ophezulu, ihlaziywe yinkqubo ekhethekileyo, Ayikwazi ukunxiba into entle; iibholiti zamandla aphezulu, ukusetyenziswa okukhuselekileyo nokuthembekileyo.
Ukusetyenziswa komatshini wokusika umququ
1,Lo matshini usika umququ ulungele ingca eluhlaza, ingca yengqolowa, umququ, imbotyi, umbona okanye isiqu sengqolowa ukondla izilwanyana,ezinje ngeebhokhwe zeegusha njl.
2,Lo matshini usika umququ unceda izilwanyana ukugaya ngokukhawuleza.
3,Isebenzisa imoto njengenjini enamandla
4, Lo matshini wokusika ingca unokusebenza kwindawo ephezulu.
Ukuchazwa komatshini wokusika umququ
Umthamo(h / h)
ividiyo yomatshini wokusika umququ